Bruno Fernandes Oo Heshiiskiisu Wakhti Dheer Qaatay Hadana Wuxuu Noqday Mid Wacdaro Ka Dhiga Gudaha Kooxdiisa Man United? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Waxa laga yaabaa inay qaadatay wakhti dheer in la dhammaystiro, laakiin saxiixa Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa dhaqso u bilaabay inay u muuqato mid ka mid ah ganacsiga ugu fiican xilli ciyaareedkan.
In kasta oo uu xiddigu laftiisu ku adkaystay in aanu masuul ka ahayn dib u soo noolaynta qaab ciyaareedkii uu arkay Red Devils 11 kulan oo aan laga badin tartamada oo dhan, qaar yar ayaa dafiran kara saamaynta uu sameeyay tan iyo markii uu bishii January ugu soo biiray lacag dhan 46.5 milyan oo euro (€ 55m) ).
Xaqiiqdii, qaabkiisii ​​wuxuu arkay isagoo abaalmarin ku muteystay abaalmarinta Xiddiga Sannadka Premier League ee Bisha February, taasoo ka dhigtay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyay ee United ah tan iyo Anthony Martial oo ku guuleysta abaalmarinta bishii ugu horreysa.
25 jirka ayaa sidoo kale ahaa ciyaartoygii ugu horreeyay ee reer Portugal ee ku guuleysta abaalmarintan tan iyo markii uu khadka dhexe uga ciyaarayay kooxda Chelsea Deco bishii August 2008.
Fernandes ayaa cadaadis saaraya sidii uu ugu soo kaban lahaa meeshii uu ka tegay iyadoo Premier League loo qorsheeyay inuu ku soo laabto 17ka Juun, seddex bilood ka dib markii cudurka faafa ee coronavirus uu ku qasbay shaqadiisa.
Sida xogta Opta ay muujineyso, wuxuu umuuqdaa inuu yahay nin ku celin kara United koobka Champions League xilli ciyaareedka soo socda …
5 – Tan iyo markii ugu horeysay ee uu ciyaaray 1dii Febraayo, Fernandes wuxuu ku lug lahaa shan gool oo Premier League ah, isagoo dhaliyay labo jeer islamarkaana caawiyay seddex kale. Ma jiro ciyaartoy kale oo is barbar dhigi kara isla waqtigaas. Kuwa ugu dhow waa Mohamed Salah (afar gool), Dominic Calvert-Lewin (seddex gool, hal caawin), Diogo Jota (seddex gool, hal caawiye), Robert Snodgrass (labo gool, labo caawin), Sadio Mane (seddex gool, hal caawin) ) iyo Nicolas Pepe (hal gool, seddex caawin).
3 – Xaqiiqdi, ma jiro ciyaartoy caawiyay in ka badan caawinta Premier League tan iyo 1dii Febraayo marka loo fiiriyo Fernandes. Pepe, Roberto Firmino iyo Ross Barkley ayaa ah ciyaartoyda kale ee seddexda ah.
19 – Laga yaabee inay si aan qarsoodi aheyn, Fernandes ayaa ugu sarreeya shaxanka isku dayga toogashada tan iyo markii ugu horeysay. Wuxuu diiwaangeliyay 19, inta ugu badan ee Raul Jimenez iyo Jay Rodriguez iyo in ka badan Calvert-Lewin iyo Salah (labadaba 17).
11 – Fernandes wuxuu abuuray 11 fursadood asxaabtiisa (oo ay kujiraan caawinaad), lamid lamid ah Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ondrej Duda iyo Andrew Robertson. Kaliya seddex ciyaaryahan ayaa diiwaan gashan wax kabadan tan iyo markii ugu horeysay: Joao Moutinho (12), Dwight McNeil (13) iyo James Maddison (16).